Chelsea laacibkeeda Willian oo heshiiska shaqsiga la gaaray koox ka ciyaarta Premier League – Gool FM
(London) 06 Maaajo 2020. Laacibka kooxda Chelsea ee Willian ayaa dhowaanahan lala xiriirinayay u dhaqaaqista kooxaha kala ah Tottenham Hotspur iyo Arsenal, waxaana hadda lagu soo warramayaa inuu heshiiska shaqsiga ah la gaaray kooxda Spurs, xagaaganna uu ku biiri doono kaddib marka uu dhaco qandaraaskiisa Blues dhammaan xilli ciyaareedkan.
Garabka reer Brazil ayaa toddobo sano ku qaatay kooxda Stamford Bridge ka dhisan, balse kooxda galbeedka London ayaa ku guuldarreysatay inay heshiis cusub ka saxiixato laacibkan.
Willian iyo qoyskiisa ayaa doonaya inay baaqi ku sii ahaadaan magaalada London, iyadoo 31-jirkan muddooyinkii ugu dambeeyay lala xiriirinayay Tottenham iyo Arsenal oo caasimadda England kala dhisan kooxda Chelsea.
Balse rabitaankiisa ah inuu dib ula midoobo Macallin Jose Mourinho ayaa saldhig u ah doorasha Spurs, iyadoo la xasuusto in Mourinho uu Willian usoo gacan galiyay Blues sanadkii 2013 oo ku beegneyd billawgii xukunkiisa labaad ee Stamfor Bridge.
Sida laga soo xiganayo barnaamij soo jeediyaha beIN Sports ee Richard Keys, heshiiska Willian uu ugu biirayo Tottenham ayaa horraan la isla meel dhigay, waxaana marka uu idlaado xilli ciyaareedkan uu si bilaash ah ugu dhaqaaqi doonaa kooxda uu hoggaamiyo macallinkiisii hore ee Mourinho.